Karen Community Association UK: 2010
SECOND EUROPEAN KAREN CONFERENCE WAS HELD SUCCESSF...
ယူရိုပီယံ ကရင်နက်ဝပ် ညီလာခံကျင်းပ
ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်မှု (၂၂) နှစ်မြောက် အမှတ်တရ
နအဖ တပ်က DKBA ကို ထိုင်းမြေပေါ်မှ တိုက်ရန် ကြိုးစား...
မာနယ်ပလော ကျုံဒိုးနား တိုက်ပွဲများဖြစ်
Pinned down in Karen State
Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting Statement...
ဒေါက်တာစင်သီမောင် ကို DVB တွေ့ဆုံမေးမြန်း
Karen Freedom Fighter
FCOB DOCUMENTARY ABOUT THE SITUATION ALONG THE BOR...
ကရင် DKBA နှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF စစ်ရေးအရ ...
Stop pressuring Burmese refugees into returning ho...
ဖလူးတိုက်ပွဲမှာ နအဖ အရာရှိကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကို ဒီကေ...
ဒီကေဘီအေ နှင့်ကျောင်းသားတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက သ...
တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ဖလူးဒေသက နအဖ တပ်များ ဦးတည်ရာမဲ့...
Karen Community Association UK members met with El...
နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေတိုက်ပွဲ ပိုမိုပြင်းထန်၊ နအဖတပ်အင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မင်းသမီး မစ်ရှဲလ်ယိုနှင့်တွေ့ဆံ...
ဖမ်းဆီးခံ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင် စီအဖွဲ့ဝင် ၆ဦး၏...
စစ်အစိုးရနှင့် DKBA တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ် ...
ရဲဘော်ကျော်သန်း၏ ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာတပိုင်းတစအမြင် ...
မဲန်ဒဲလား ထောင်သက် ၂၇နှစ်ကျော်၊ လွတ်။ ကရင်ရဲဘော်လေ...
မြ၀တီမြို့နယ်အတွင်း နအဖတပ်နှင့် ဒီကေဘီအေတပ်များ ဆက...
ခင်ညွှန့်ကို ခေါ်ဆောင်သွားစဉ် (အသံပါဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း...
နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေတိုက်ပွဲ ထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြား
Thai army ‘obstructing refugees’
Fighting In Karen State
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းနိုင်ငံကို တောင်းဆို
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ၆ဦး နအဖ ဖမ်းမိ...
စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် သူတို့၏ စစ်ယူနီဖောင်း
A fresh outbreak of heavy fighting in eastern Burm...
Security tightened in Kachin capital
Footsteps for Burma on ABC television
ဖလူးမှာ ဒီကေဘီအေနှင့်နအဖ ၂ ရက်ဆက်တိုက် တိုက်ပွဲဖြစ...
ကေအန်ယူ နဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့များ ပူးပေါင်းအင်အားနဲ...
ပြည်သူ့ရဲဘော် ပါ ရဲဘော်ရဲ့ပြည်သူ မဟုတ်ဘူး
General Khin Nyunt Video Clip
ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်
စစ်အစိုးရ၏ အင်တာနက်ဆာဗာနှင့် သတင်းစာမျက်နှာ တိုက်ခ...
CCTV video of North Korean bombs hitting South's Y...
ဝေါ်လေဒေသရှိ စစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ စားရေရိက္ခာပြတ်လပ
Posted by KCA.UK at 07:580comments
SECOND EUROPEAN KAREN CONFERENCE WAS HELD SUCCESSFULLY
A Europe-wide Karen conference was held successfully on 28-29 December 2010 in Nyborg, Denmark.
This is the second timeaEuropean Karen Conference, organised by the European Karen Network, has been held in Europe. Karen communities from five countries; Germany, Denmark, Sweden, Norway and the United Kingdom, participated in the meeting.
The purpose of this meeting is to organise Karen communities in Europe to support the struggle for freedom in Burma.
Various issues related to the Karen people were discussed during the meeting including, the need to strengthen Karen communities across Europe, how to influence governments in countries where there are Karen communities, and improve cooperation with other exiled ethnic groups from Burma.
As the November 2010 elections in Burma did not bring change that the Karen and all the people in Burma want, EKN believes that through inclusive dialogue and the establishment ofafederal democratic Burma, we can move forward towards real freedom that guarantees positive change and equality for all the people in Burma. EKN would like to welcome other Karen communities around the world to work together for the development of the Karen people.
EKN calls on the European Union and the United Nations to redouble its efforts to pressure the dictatorship in Burma to enter into negotiations with ethnic forces, and democracy forces led by Daw Aung San Suu Kyi, through tripartite dialogue. The EU and UN should take the issue of the Karen and other ethnic groups more seriously and bring them into Burma’s political process.
European Karen Network was set up in July 2009 with the aim to raise awareness about the situation of the Karen people of Burma, and Burma asawhole. We are the voice in Europe of the Karen struggle for freedom. We pressure European governments and the rest of the international community to do more to bring about democratic transition in Burma.
Karen New Year celebration is taking place on 30th December 2010 following the European Karen Conference and it is organised by the Karen Community Denmark. ﻿
At European Karen Network Conference, Denmark 28-29 December 2010.
Posted by KCA.UK at 03:220comments
Posted by KCA.UK at 18:150comments
Posted by KCA.UK at 17:300comments
နအဖ တပ်က DKBA ကို ထိုင်းမြေပေါ်မှ တိုက်ရန် ကြိုးစား
ဧရာဝတီ Thursday, 23 December 2010 18:49
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နယ် ဖလူးဒေသတွင် တပ်စွဲထားသည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) ဗျူဟာ (၁) နှင့် ဗျူဟာ (၂) တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ချေမှုန်းရန် ထိုင်းနိုင်ငံ တဖက်ကမ်းမှ တဆင့် ၀င်ရောက်လာမည့် နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင် (၅၀) ခန့်ကို ယမန်နေ့ညက လက်ဦးမှုယူ၍ DKBA က တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
DKBA ဗျူဟာ(၁)မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်သက်က"ဖလူးရွာမှာ အခြေစိုက် တပ်က အင်အား(၅၀) မနေ့ည(၈)နာရီမှာ ထိုင်း ဘက်ခြမ်း မဲဆောက်အပိုင် မဲ့ကိုကင်းရွာကနေ ကူးပြီး ကျနော်တို့ကို တိုက်ဖို့ ဆင်းလာတာကို သိလို့ ပြန် တိုက်ထုတ် လိုက်ရတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်းတိုက်ပွဲကြောင့် နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦး ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟု သိရသော်လည်း မည်သည့် တပ်မှ ဖြစ်ကြောင်းကိုမူ အတိ အကျ မသိရှိရသေးပေ။
နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ၀င်ရောက်မည့် အစီအစဉ်မှာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ ခွင်ပြုချက် မရဘဲ ၀င်ရောက် ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိကြောင်း၊ အလားတူ ၀င်ရောက်မှုမျိုးကို ယခင်က ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ခွင့်ပြုခဲ့ဖူးကြောင်း DKBA တပ်မှူး တဦးက ပြောသည်။
မဲဆောက် အခြေစိုက် အမှတ်(၄) ဒေသဆိုင်ရာ ကွပ်ကဲရေး တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူပါချို့ထ၀ပ်ဖိလာချိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်မှ မည်သည့်လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကိုမဆို ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အခြေချ လုပ်ရှားခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ တွေ့ရှိ ပါက ဖမ်းဆီး အရေးယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ သတင်းထောက်များကို ပြောကြားထားသည်။
ထို့အပြင် ထိုင်းပြည်သူများ လေးစားကြည်ညိုသော အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တဦး ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ခရီးစဉ်ရှိသည့် အတွက် DKBA နှင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်များက နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းများကို ခေတ္တရပ် နားဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်။
အတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်းများအရ ထိုင်းဘုရင့် သမီးတော် မဟာချက်ကရီ သီရိဒုံ မင်းသမီး ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် သို့ ယခု လကုန်ပိုင်းတွင် အလည်အပတ် ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်သက်က"ဒီခရီးစဉ်ရှိတဲ့ အတွက် ဒီရက်ပိုင်း အတွင်းမှာ ကျနော်တို့ဘက်က ဘာစစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုကိုမှ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီအရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကျနော်တို့လည်း လေးစားပြီးသားပါ၊ နအဖ ဘက်ကသာ လေးစားအားနာရ ကောင်းမှန်း မသိဘဲ အရင်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဘက်က သင့်တင့်တဲ့ နည်းတမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုင်တွယ်သွား ရမှာ ဖြစ်တယ်"ဟု ဆိုသည်။
ယနေ့ မြ၀တီနှင့် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ဒေသများတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိသော်လည်း အချိန်မရွှေး ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီခရိုင် ဖလူးကြီး၊ ဖလူလေး၊ မင်းလက်ပံ ရွာမှ ရွာသား ၁၀၀၀ ခန့် ထိုင်းနယ်စပ် အနီးရှိ ကျေးရွာများတွင် ခိုလှုံနေကြောင်း ၎င်းတို့ကိုအကူ အညီပေးနေသည့် မယ်တော်ဆေးခန်း(MTC)အဖွဲ့မှ ဆေးမှူးစောနေဦး က ပြော သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ် မြ၀တီမြို့နယ် အပါအ၀င် ဘုရားသုံးဆူမြို့နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်များတွင် စစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA တပ်မဟာ ၅ တို့ တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် နေ့စဉ်နီးပါး တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
<a target='_blank' href='http://ads.protore.net/www/delivery/ck.php?n=4ba2ecd'><img border='0' alt='' src='http://ads.protore.net/www/delivery/avw.php?zoneid=34&n=4ba2ecd' /></a>
Posted by KCA.UK at 01:200comments
ကျော်ခ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၃၈ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ပြောက်ကျားတပ်များနှင့် စစ်အစိုးရတပ်များ မနေ့ မနက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကေအင်ယူ ဘားအံခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုစောအောင်မော်အေးက ပြောသည်။
ကေအင်ယူနယ်မြေ မာနယ်ပလောသို့ အင်အား ၂ဝဝ ကျော်ဖြင့် ချီတက်လာသော စစ်ဆင်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဌာန ၁၉ လက်အောက်ခံ ခမရ ၁ဝ၆ နှင့် ၆၁ တပ်ရင်း ၂ ရင်းကို အင်အား ၂ဝ ကျော် ပါဝင်သည့် KNU တပ်မဟာ ၇ လက်အောက်ခံ ၂ဝ၂ ပြောက်ကျားတပ်များက မနေ့ မနက် ၇ နာရီက တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ပြောက်ကျားတပ်များက မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်များ၊ RPG၊ AK 47 နှင့် ဆွဲမိုင်းများ အသုံးပြု၍ ချုံခို တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် စစ်အစိုးရတပ်မှ တပ်ကြပ်ကြီး တဦး၊ တပ်ခွဲမှူးတဦးနှင့် တပ်သား တဦး ကျဆုံးသွားပြီး တဦး ဒဏ်ရာ ရရှိသည်ဟု ပဒိုစောအောင်မော်အေးက ပြောသည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်သည့်နေရာသည် အစိုးရစစ်တပ်များတည်ရှိရာ မဲသဝေါနှင့် ကပ်နေပြီး မနေ့က KNU များ၏ ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရှေ့ဆက်မတိုးဘဲ ယင်းနေရာ၌ပင် စခန်းချနေသည်ဟု ဆိုသည်။
“စစ်တပ်က ဒီနယ်မြေကနေပြီး KNU ကို အပြီးမောင်းထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။ ကျနော်တို့ကလဲ ကိုယ်ရပ် တည် ရှင်သန်ရေးအတွက် အဲဒီကိစ္စအပေါ်မှာ လက်မခံနိုင်တော့ အပြန်အလှန်ရင်ဆိုင် တိုက်ကြတဲ့သဘောပါ” ဟု
KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ထို့အပြင် မနေ့က ကော့ကရိတ်ခရိုင် ကျုံဒိုးမြို့နယ် လို့လဲ့ ဒေသ တွင် ခမရ ၅၈၈၊ ၄ဝ၈ တို့နှင့် အပစ်ရပ်ပျက်ပြားသွားသော DKBA ဗိုလ်မှူး ဘငြိမ်း ဦးဆောင်သည့် ၉ဝ၂ တပ်ဖွဲ့များ ရင်ဆိုင်တိုက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဒီကေဘီအေ ဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ ဗိုလ်မှူး ချစ်စရာက မဇ္ဇျိမကိုပြောသည်။
၂ ဘက်လုံးတွင် သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိသော်လည်း DKBA နှင့် KNU ကရင်တပ်များကို ချေမှုန်းရန် စစ်တပ်မှ ပြင်ဆင်နေသဖြင့် တိုက်ပွဲများ ထပ်ဖြစ်လာဦးမည်ဟု သူကဆက်ပြောသည်။
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်မှစ၍ တလကျော်အကြာဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်မှ ဒေသခံ ၃ဝဝဝ ကျော် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်၊ ဖုတ်ဖရာ့မြို့နယ်နှင့် အုန်းဖန်တို့တွင် လာရောက် စစ်ဘေးခိုလှုံနေကြကြောင်း ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးနေသည့် မယ်တော်ဆေးခန်းမှ သိရသည်။
“အခုဟာ ဒုက္ခသည်တွေက များလာတော့ ချက်ပြုတ်ကျွေးလို့မနိုင်တော့ဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် တပတ်တခါ ရိက္ခာခြောက်တွေကို လူဦးရေအလိုက် ကျနော်တို့က လိုက်ပြီး ဝေပေးနေတယ်လေ” ဟု ဒုက္ခသည်များကို အကူညီပေးရာတွင် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကိုနေဦးက ပြောသည်။
ထိုင်းအာဏာပိုင်များထံ ခိုလှုံခွင့်တောင်းလျှင် စစ်ငြိမ်သွားချိန်တွင် ချက်ချင်းပြန်ပို့မည် စိုးသဖြင့် ဒုက္ခသည်များ လယ်ထဲ ချောင်းနားတွင် မိုးကာစများခင်း၍ ခိုလှုံနေကြရ၍ ရာသီဥတု အအေးဒဏ်ကိုခံနေရကြောင်း သူကဆက်ပြောသည်။
တိုက်ပွဲနယ်မြေများတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရက စစ်တပ်အင်အားများ တိုးချဲ့စေလွှတ်နေသဖြင့် နယ်စပ်တလျောက် တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့် မြန်မာဘက်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေပြေးလာလျှင် စောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်ဖို့အတွက် ယာယီရွက်ဖျင်တဲများ၊ အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း၊ အစားအသောက်၊ သောက်ရေသန့်၊ ဆေးဝါးတို့ကို ပြင်ဆင်ထားဖို့ ထိုင်းနယ်စပ်တလျောက် မြို့ပိုင်တွေကို ညွန်ကြားထားကြောင်း တာ့ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နိုင်စမတ် လွိုင်ဖားက ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းဌာနကို ပြောဆိုထားသည်။
Posted by KCA.UK at 01:140comments
by Daniel Pedersen on Dec.21, 2010, under Burma reportage
KNLA fighting near Thai-Burma border
Karen National Liberation Army 'Black' Special Forces commander Htoo Htoo letsa60mm mortar rip towardsaBurma Army base camp in an area known as Maw Kee, close to the Thai border. The State Peace and Development Council base camp has been besieged for weeks now, the soldiers forced to live underground.
Snipers have make on Burma Army base camps
Combined ethnic Karen armies have besieged three Burma Army base camps near the Thai-Burma border to the south of Mae Sot.
The camps – at Toh Kyo, K’ne Ley and Maw Kee – are the government’s closest footprint to the Thai border in this mountainous region.
More than 160 soldiers of Burma’s ruling military junta, the State Peace and Development Council, are pinned down, living underground, not daring to raise their heads for fear of attracting fire.
The Burma Army soldiers constitute the main body of government troops that once controlled the border with its former ally, the Democratic Karen Buddhist Army, which was employed asaforward fighting force.
The DKBA mutinied on November 7, the day of Burma’s much-maligned election, taking control of strategic points in the frontier trading town of Myawaddy.
Fighting persisted for two days before the DKBA pulled out.
Since then the DKBA has rejoined forces with the revolutionary Karen National Liberation Army, which has been fighting for an independent Karen state since 1949.
The two Karen factions first split in 1994.
The Burma Army base camps now besieged are on high ground, from where SPDC soldiers once commandedacomfortable bird’s-eye view as they directed their Karen allies during firefights.
But the wet season is now finished in this part of South East Asia and high ground isaliability, because streams fed by steady rains since June have dried up.
Now the Burma Army soldiers must make their own way down from hillside bunkers to access permanent water, making themselves vulnerable in the process.
The combined Karen forces have laid land mines and set Claymore booby traps on pathways leading to the creeks and their snipers maintainasilent, camouflaged vigil waiting forachance to hit their enemies.
Drinking water for mere survival takes precedence over sanitary conditions and the SPDC troops now have not been able to wash for almostamonth.
“Now they are really under attack,” said one KNLA “Black” Special Forces soldier.
“They’ve gotabase camp at the top of the hill and the bottom of the hill is surrounded, we have snipers with .308 calibre rifles and telescopic sights at 600 yards, 300 yards and much closer, maybe not even 200 yards,” he said.
“They’re [the SPDC] spending most of their time underground.”
The base camps have formidable bunkers dug deep into what is now dry, rock-hard clay and the tops are armoured with hardwood logs.
Karen soldiers said foliage was very dense around the camps and it was difficult to see anything.
Nevertheless, on Saturday the SPDC soldiers were forced out of their bunkers in search of water.
They used M-79 grenade launchers to clearapath through landmines to gather drinking water.
One of the Karen snipers said, because of the dense foliage, night time had become an ally.
“Any time they turn onalight they get shot at.
“One guy litacigarette, he was shot, I don’t know whether I killed him or not, but the lights went out and the cigarette went down – that was from 600 yards,” the sniper said.
He also wounded another soldier in the leg at 1068 yards.
“I’m usinga.308 Remington model 700 withamid-range Bushnell scope,a24-power variable magnification adjustable scope,” he said.
“So after that, they moved most of their troops to the other side [of the hilltop], mainly to get away from the snipers andaChinese-made .50 calibre machine gun we’re using, but then on the other side we hit them with RPGs [rocket-propelled grenades] and 60mm mortars,” he said.
Their position, on the whole, was “not very good” he said, “really not good.”
“They’ve been on the radio begging for recruits to back them up, but they have been refused because three base camps in the area are all under attack.”
Other soldiers said there had been some return fire.
“There’s been some .50 calibre machine gun fire and some 81mm mortars but they haven’t come in on target,” he said.
“They really just don’t know what they’re shooting at.”
The Maw Kee base camp is the largest of the three under attack, home to between 80 and 100 men.
A little further north at K’ne Ley about 50 to 80 Burma Army soldiers are pinned down and “the only place they walk is back and forth in their holes”.
The most northern, and smallest, of the besieged government camps is Toh Kyo.
There too, the SPDC troops are stuck underground, with snipers at 800m, 400m and 200m
Ba Wa, the KNLA’s chief medic for the region, who has 15 medics at 10 different locations in the area, said the water supply to Toh Kyo had been surrounded with Claymore mines and land mines and snipers were laying in wait.
On Monday afternoon Ba Wa was at war with his mobile phone in Mae Sot.
Reports were constantly being called in about an ambush at Wa Shu Pu, between the Karen villages of K’ne Ley and Wah Lay.
A Burma Army unit of about 25 men was in the thick ofaClaymore ambush and excited medics were calling their commanding officer to update him.
Terminatingafinal call before leaving town he said: “I’ve heard five [SPDC troops] injured by rifle fire and one has sufferedaland mine injury, but it’s impossible to really know how many have been wounded because it’s still going on,” he said at about 2pm.
Ba Wa said his medics had been monitoring Burma Army radio transmissions and the men caught in the ambush had been reinforcements trying to sneak into Maw Kee.
The reinforcements didn’t get withinaday’s walk of that besieged base camp.
Karen National Liberation Army 'Black' Special Forces commander-in-chief Colonel Nerdah Mya surveys the besieged Burma Army camp. By nightamere suggestion of light attracts sniper fire into the bunkers they are trapped in - Photo: Mike Garrod, Imagine Pictures UK
A young Karen soldier shoulders an M16 as he listens for the radio call to move forwards - Photo: Mike Garrod, Imagine Pictures UK.
Soldiers of the Karen National Liberation Army and the Democratic Karen Buddhist Army, now fighting together after more than 15 years divided, pile intoatruck after being re-supplied with M-79 grenades on Sunday (DEC 19, 2010) - Photo: Mike Garrod, Imagine Pictures UK.
A Karen National Liberation Army soldier stands ready to deploy another rocket-propelled grenade at the besieged Burma Army base camp near Maw Kee, close to the Thai-Burma border - Photo: Mike Garrod, Imagine Pictures UK.
Karen National Liberation Army 'Black' Special Forces commander-in-chief Colonel Nerdah Mya leads his mean toanew position below the besieged Burma Army base camp - Photo: Mike Garrod, Imagine Pictures UK.
Karen National Liberation Army 'Black' Special Forces commander-in-chief Colonel Nerdah Mya leads his men toanew position below the besieged Burma Army base camp - Photo: Mike Garrod, Imagine Pictures UK.
Posted by KCA.UK at 08:090comments
Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting Statement In Karen
Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting Statement In Karen Language -
Posted by KCA.UK at 14:270comments
Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting Statement In Burmese
Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting Statement In Burmese Language -
Posted by KCA.UK at 14:200comments
Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting Statement In English
Fourteenth KNU Congress, 3rd CSC Meeting Statement -
Posted by KCA.UK at 14:180comments
Posted by KCA.UK at 02:040comments
Posted by KCA.UK at 07:350comments
ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ် ဝေါ်လေဒေသနှင့် ချူကလီးဒေသဘက်တွင် နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေတို့ကြား တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား ခဲ့ရာ တိုက်ပွဲအခြေအနေမှာ ယနေ့အထိ ပြင်းထန်လျှက်ရှိသည်ဟု ကေအိုင်စီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယနေ့ နေ့လည်တွင် ချူကလီးဒေသ၌ အသစ် ၀င်ရောက်လှုပ်ရှားလာသည့် စကခ(၁၉)လက်အောက်ခံ ခလရ(၂၉၉)၊ ခမရ (၅၈၆)နှင့် ဝေါ်လေကျေးရွာ သုခမြိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ နအဖ စကခ(၈) လက်အောက်ခံ ခမရ(၄၀၉)တပ်ဖွဲ့အား ဒီကေဘီ အေ ကလို့ထူးဘောဗျူဟာမှ ၃ကြိမ် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ချူကလီးဒေသတွင် လှုပ်ရှားနေသော ဒီကေဘီ အေ ကလို့ထူးဘောဗျူဟာ လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့မှ ဒုဗိုလ်စောစမင်းက ပြောသည်။
သူက “ဒီနေ့ နေ့လည် ၁၂း၁၅မိနစ်အချိန်မှာ ချူကလီးဒေသ မော်ကနော်ခီးမှာ ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့နဲ့ နအဖ ခလရ(၂၉၉)ကြား လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ၁၀မိနစ်ကြာ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ကြတယ်။ ၁၂း၄၅မိနစ်အချိန်မှာလည်း ဝေါ်လေမှာရှိတဲ့ နအဖ ခမရ(၄၀၉)တပ်ရင်းကို ၅မိနစ်လောက် ကျနော့်လူတွေ တက်ပစ်တယ်။ ဒီညနေ ၄း၄၅မိနစ်မှာလည်း မော်ကနူခီးတ၀ိုက် မှာပဲ ခမရ(၅၈၆)နဲ့လည်း ၁၀မိနစ်ကြာ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ကြတယ်။”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွင် နအဖဘက်က ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများ ရှိသော်လည်း စာရင်းအတိအကျ သိရှိရန်အတွက် စုံစမ်းနေဆဲဖြစ် သလို ပြောက်ကျားစစ်နှင့် ချုံခိုတိုက်ပွဲဖြစ်သည့်အတွက် ဒီကေဘီအေဘက်က ထိခိုက်မှု တစုံတရာ မရှိကြောင်း ဒုဗိုလ်စောစ မင်းက ဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဝေါ်လေဒေသရှိ ဖလူးကျေးနယ်ဘက်တွင် လွန်ခဲ့သည့် ၃ရက်ခန့်ကတည်းက နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အကြား ပစ်ခတ်မှု ခေတ္တ ရပ်တန့်သွားသော်လည်း ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း နအဖ စစ်တပ်ဘက်မှ စစ်သည်အင်အား ဖြည့်ဆည်း လျှက်ရှိသောကြောင့် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားနိုင်မည့် အခြေအနေရှိကြောင်းလည်း ဖလူးရွာသားတဦးက ပြောသည်။
ယခုလို ဝေါ်လေကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တိုက်ပွဲကြောင့် ဝေါ်လေရွာသူရွာသားအားလုံးနီးပါးမှာ မိမိတို့၏ ကျေးရွာမှ ထိုင်း ဘက်ခြမ်းသို့ ယနေ့ ထပ်မံ ထွက်ပြေးလာရပြန်သည်ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် ဝေါ်လေရွာသားတဦးက ကေအိုင်စီကို ပြော သည်။
အလားတူ ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် နိုဒေးဂွင်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့က နအဖ စစ်တပ်နှင့် ဗိုလ်မှူးစောတာမလာ ဦးစီးသည့် KNLA တပ်ရင်း(၂၀၂)တို့ ၃ကြိမ်ဆက်တိုက် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နအဖဘက်မှ ဗိုလ်ကြီးတဦး၊ တပ်ကြပ်ကြီးတဦးနှင့် တပ်သား ၂ဦး အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်မဟာ(၇) ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ် မှူးစောအဲဆဲဆဲက ပြောသည်။
“အဲဒီနေ့က သုံးကြိမ်ဖြစ်တာ။ ဒီနိုဒေးဂွင်တစ်ခုထဲမှာပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ တပ်ရင်း(၂၀၂)က ဒုရင်းမှူး ဗိုလ်တာမလာရဲ့အဖွဲ့နဲ့ ခမရ (၃၃၈)တို့ မနက် ၉း၁၅ နာရီမှာတကြိမ်။ ခမရ(၅၈၇)နဲ့ မနက် ၉း၃၀နာရီမှာတကြိမ်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး အူးမိုးခီးရွာရဲ့ အပြင် ဖက်မှာတော့ ကျနော်တို့ (၂၀၂)တပ်ဖွဲ့နဲ့ ခလရ(၂၈)နဲ့ ၉း၃၀နာရီမှာပဲ ဖြစ်ကြတော့ အဲဒီသုံးပွဲမှာ ကျနော်တို့ဘက်က ထိခိုက်မှု မရှိဘူး။ နအဖဘက်ကတော့ အရာရှိ အပါအ၀င် ၄ဦး ထိခိုက်မှုရှိတယ်။”ဟု ဆိုသည်။
၎င်းအပြင် ယနေ့မနက် ၁၀နာရီဝန်းကျင်တွင် အဆိုပါ ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်ရင်း(၂၀၂)တပ်ဖွဲ့သည် ပိုင်ကျုံ(တာကရယ်) မြို့နယ် ပွိုင့် ၉၁၃နေရာရှိ နအဖ ခမရ( ၅၈၇)ကို ပြောက်ကျားပစ်ခတ်ခဲ့သော်လည်း နှစ်ဖက် ထိခိုက်မှုမရှိဟု သိရသည်။
Posted by KCA.UK at 17:590comments
FCOB DOCUMENTARY ABOUT THE SITUATION ALONG THE BORDER.
Posted by KCA.UK at 17:200comments
ဒီဇင်ဘာ ၁၀ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုသည် အချိန်တစ်လကျော်ကြာရှိပြီ ဖြစ်သော် လည်း ချူကလီးဒေသဘက်တွင် ယခု စတင်ဖြစ်ပွားသည့် ပစ်ခတ်မှုမှ ဒဏ်ရာရ နအဖစစ်သည်များကို ချူကလီးဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင်ခဲ့သည် သိရသည်။
Posted by KCA.UK at 14:05 1 comments
(Courtesy of MoeMaka)
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) မှ တပ်ဖွဲ့တခုကို တောတွင်းတနေရာတွင် တွေ့ရသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Courtesy of MoeMaka)
စစ်မှန်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ဖြစ်ဖို့နဲ့ တိုင်းရင်းသား တန်းတူအခွင့်အရေး ရဖို့ ဒီကေဘီအေရဲ့ ခုခံစစ်ကို ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ ပူးပေါင်းတာ ဖြစ်တယ်လို့ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသံခဲက ပြောပါတယ်။
“ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားပွယ်တို့ နအဖအပေါ်မှာ တန်ပြန် တော်လှန်တိုက်ပွဲဆင်တာဟာ အခုဆိုရင် တလပြည့်ပြီ။ ဒီတလပြည့်တဲ့ အချိန်ကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတပ်မတော် အနေနဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားပွယ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုက်ရိုက် ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ရတယ်။ နောက်တခုကတော့ KNLA ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရတယ်။ နားလည်မှုတွေ ယူပြီးမှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ တင်ပြလိုပါတယ်။”
ပြီးခဲ့တဲ့လက ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မြဝတီမြို့ကို ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့တွေ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နအဖနဲ့ ဒီကေဘီအေတပ်တွေ နေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာတာ တလနီးပါး ရှိပါပြီ။
ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကာလ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့ ဒီကေဘီအေကို နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ စစ်အစိုးရက ဖိအားပေးရာကနေ အခုလို နယ်စပ်တလျှောက် တိုက်ပွဲတွေ အရှိန်မြင့်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 08:330comments
Stop pressuring Burmese refugees into returning home - Kraisak Choonhavan MP
Bangkok, 09 December, (Asiantribune.com):
Kraisak Choonhavan MP
Kraisak Choonhavan MP and the deputy leader of Thailand’s ruling Democratic Party has appealed to stop pressuring Burmese refugees into returning home until and unless it has been confirmed by all fighting parties that the fighting has ended.
Inaletter regarding Burmese refugees protection and assistance in Thailand addressed to Director of Border Affairs Department, Royal Thai Armed Forces, Kraisak Choonhavan who is also Chair of the Thai national caucus, ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus has pointed out that it has been reported that Burmese refugees in Mae Sot and Pop-Phra, Tak Province, have been pressured by representatives of the Royal Thai Army into returning to Burma and that they have been told that fighting has ended.
He further pointed out that “In fact, the fighting is still ongoing and such returns are premature. Asaresult, people have had to flee repeatedly to safety, while some have gone into hiding in Thailand out of fear of being repatriated.
The letter which has also been copied and sent to Thai Prime Minister, Foreign Minister, Supreme Commander, Army Chief and Third Army Commander-in-Chief, Thai MP Kraisak Choonhavan has called on the Department of Border Affairs to establishacooperative mechanism between government agencies, international and local organizations to assess the situation, develop contingency plans, provide humanitarian assistance to refugees and develop standard principles for repatriation and for assistance during and after repatriation.
The letter went on to urge the importance of the protection and assistance to Burmese refugees on Thai soil.
"It further revealed that since the election took place in Burma on7November 2010, there has beenagreat amount of instability and violence in the border areas between Burma and Thailand. Fighting between the State Peace and Development Council (SPDC) and ethnic non-state armed groups in Burma has assumed extraordinary proportions.
Accordingly, “Several thousand refugees fled into Thailand asaresult of the eruption of fighting on and after Election Day, while sporadic fighting since then has displaced communities along the border several times. Civilians in Burma are entitled to protection under international humanitarian law as long as the conflict continues. However, such reports indicate that this is currently not being respected by either party to the conflict.
Kraisak Choonhavan continued to insist: “As an elected Member of the Thai parliament, I am deeply concerned about the situation of these refugees on Thai soil. According to information received, the provision of humanitarian aid and the process of repatriation of recent refugees from Burma do not abide by international humanitarian and human rights standards. Several local and international organizations have criticized Thailand for not living up to our international obligations.
“Although the Royal Thai Government has stated that there will be no enforced repatriation of refugees until the situation stabilizes, it has been reported that refugees in Mae Sot and Pop-Phra, Tak Province, have been pressured by representatives of the Royal Thai Army into returning to Burma and that they have been told that fighting has ended. In fact, the fighting is still ongoing and such returns are premature. Asaresult, people have had to flee repeatedly to safety, while some have gone into hiding in Thailand out of fear of being repatriated.
“While Thailand is notastate party to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, Thailand has an obligation under customary international law of non-refoulement of persons to places where their life or freedom is at risk. International law also obliges Thailand to allow asylum seekers access to Thai territory to seek asylum.
"I have followed the situation in Burma for many years. In my opinion, there will be no easy or immediate solution to the current conflict situation.
Under such circumstances, it is imperative that refugees from Burma be given temporary shelter on Thai soil until the fighting has really been brought to an end and they are convinced it is safe to return to Burma. This is also the only solution that will prevent Thailand from being criticized for failing to live up to international humanitarian and human rights principles," emphasised Kraisak Choonhavan.
Posted by KCA.UK at 22:220comments
ဖလူးတိုက်ပွဲမှာ နအဖ အရာရှိကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကို ဒီကေဘီအေမှ သိမ်းဆည်းရရှိ
Posted by နေ့သစ် on December 9th, 2010
ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နဲ့ ၈ ရက်နေ့မှာ ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖတို့ ဖလူး ဒေသမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ပြီး ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ နအဖ စစ်တပ်တွေ နေရာယူထားတောင်ကုန်းကို ဒီကေဘီအေ ဘက်က တက်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။
အခြေအနေကို ဒီကေဘီအေဘက်မှ ဗိုလ်ဆန်းအောင် ပြောပြ တာကတော့ …
ကျနော်တို့ နအဖ ရှိတဲ့ ဖလူးတောင်ကုန်းကို ဒီနေ့တက်ရှင်းပါတယ်။ နအဖ စစ်တပ်က ရဲဘော်တွေ ခြေဦးတည့်ရာ ပြေးကုန်ကြတဲ့ အနေအထားတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ သွေးတွေပေနေတဲ့ သုံးပွင့်နဲ့ ယူနီဖေါင်းအင်္ကျီတထည့်နဲ့ မှတ်တမ်းစာအုပ်တအုပ်တွေ့ရှိပါ တယ်။ စာအုပ်မှာ ဝင့်နောင် ဆိုတဲ့ နာမည်ရေးထိုးထားတယ်။ နောက်ပြီး စက်သွယ်ရေး စက်ကြီးမှာသုံးတဲ့ လက်လှည့် ဒိုင်နမို ၂ လုံး၊ အိုင်ကွန်စက်သွယ်ရေးစက်ကလေးတလုံး နဲ့ ရိက္ခာတွေ သိမ်းမိတယ်။ ခု ကျနော်တို့ ဖလူးတောင်ကုန်းကို သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ လို့ အခြေအနေကို ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဖလူးမှာဖြစ်နေတဲ့ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နဲ့ ၈ ရက်နေ့တွေက တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ နအဖ ရဲဘော်တွေ ခြေဦးတည့်ရာရှောက်ပြေးကုန်ကြပြီး ဒုရင်းမှူး တယောက် ဒါဏ်ရာအပြင်း အထန်နဲ့ ကျဆုံးသွားတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်
Posted by KCA.UK at 14:430comments
ဒီကေဘီအေ နှင့်ကျောင်းသားတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက သုခမြိုင် နအဖ အခြေ စိုက်စခန်းအား သိမ်းပိုက်
ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၈ ၂၀၁၀ ည ၉း၀၀ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ကျောင်သားတပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ ၀င်များနှင့် ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က ဝေါလေဒေသ အ တွင်းရှိ နအဖ တပ်စခန်း တခုဖြစ်သော သုခမြိုင် တံတားစခန်း (ရွှေမုတ်စခန်း) အား ည ၉း၃၀ မိနစ်တွင် တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ယခုသတင်းရေးသားချိန်တွင် နီးစပ်ရာ နအဖ စခန်းနှစ်ခုကိုလည်း ဆက်လက်သိမ်းပိုက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်။ (ABSDF)
Posted by KCA.UK at 00:580comments
တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ဖလူးဒေသက နအဖ တပ်များ ဦးတည်ရာမဲ့ပြေးနေကြ
ဖလူးကြီး ဖလူးလေးနေရာတွေက ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ တပ်တွေအကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ မနေ့က ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ တရက်လုံးနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့မနက်ပိုင်း မှာလည်း ထပ်မံဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
တိုက်ပွဲအခြေအနေကို ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်ဆန်းအောင် ပြောပြတာက….
မနေ့က မနက် ၁၀ က စတိုက်တာ ညနေစောင်း ၅ နာရီလောက်ထိ တိုက်လိုက်နား လိုက် တိုက်လိုက်နားလိုက်နဲ့ပေါ့။ အဲဒီနေ့ကြပြန်တော့လည်း မနက်ကနေ နေ့လည် ၁၁ နာရီလောက်ကြာမယ်။ ခုတိုက်ပွဲမှာတော့ နအဖ ခမရ ၅၄၇ တပ်ရင်းက အရာ ရှိ ဒုတပ် ရင်းမှူး ဒါဏ်ရာပြင်းထန်ရပြီး သေဆုံးသွားတယ်လို့ ကြားတယ်။ နောက်တခုက သူတို့ အရာရှိကျတော့ နအဖတပ်တွေ ကစင့်ကလျားနဲ့ ဖြစ်သွားပုံရတယ်။ တယောက်တကွဲ တွေပြေးကြတယ်ဖြစ်မယ်။ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်းစီက ဗိုလ်တဲ့ခီး ရှိတဲ့ နေရာကို နအဖ စစ်သားတွေပြေးတော့ ဗိုလ်တဲ့ခီးတို့အဖွဲ့ တိုက်လွှတ်လိုက်တာ နအဖ ဆီက လက် နက်ငယ် ၂ လက် ရလိုက်တယ်တဲ့။ တပ်မ ၂၂ နဲ့ ၄၄ ကလည်း စစ်ကူလိုက်လာတယ် လေယာဉ်တွေ သုံးမယ်လို့လဲ ကြားနေရတယ်။ လို့ ပြောပြသွားပါတယ်။
လက်နက်ငယ် ၂ လက် ရလိုက်တဲ့ ဗိုလ်တဲခီးအဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ က နအဖ စစ်တပ်ရဲ့ အလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီအဖွဲ့မှ အရာရှိတဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ အရှင်ဖမ်းမိသွားတဲ့ ရဲဘော် ၆ ဦးကိုလည်း နအဖ အဖွဲ့မှ သတ်ပြစ်လိုက်ပြီလို့ ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားများ လည်း တွေ့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 00:540comments
နတ်တော်လဆန်း ၂ရက်။ဒီဇင်ဘာ ၈၊၂၀၁၀။
နော်အဲဏီ(ဒီဇင်ဘာ-၈)။ ။ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နယ်ရှိ တပ်ခေါ်ကျိုးတောင်တန်းကိုရောက်နေသည့် စစ်အစိုးရစစ်ကြောင်း၏ ရှေ့ပြေးတပ်တစ်ချို့ကို ဒီကေဘီအေဗျူဟာ (၁) မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောကျော်သက်အဖွဲ့က ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီး စစ်အစိုးရဘက်မှ(၁၀) ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်သက်မှပြောပါသည်။
“ကျနော်တို့က သူတို့ကိုအနီးကပ်သွားပစ်တယ်လေ၊ သူတို့ထိတာကို ကျနော်တို့ မြင်နေရတယ်လေ၊ ဒါကြောင့် သူတို့ဘယ်လောက်ထိတာ ကျနော်တို့ခန့်မှန်းပြောနိုင်တာပေါ့၊ အခုကျနော် တို့ဝိုင်းထားတဲ့ အဖွဲ့က သူတို့ဗျူဟာနဲ့ အခုထိ အဆက်အသွယ် မရသေးဘူး၊ ကျနော်တို့က ကြားကနေ ဖြတ်တောက် လုပ်ထားလို့ ဖြစ်တယ် ”
တပ်ခေါ်ကျိုးတောင်ခြေတွင်ရောက်ရှိနေသော စစ်အစိုးရတပ် ခလရ (၆၁) ၊ ခမရ (၂၃၀)၊ ခမရ (၅၄၇) မှ ရှေ့ပြေး ထမင်းချက်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အင်အားမှာ (၃၀)ကျော်ရှိသည်ဟု ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်သက်မှ ပြော ပါသည်။
အလားတူကလို့ထူးဘောအခြေချ ဗျူဟာ(၁)စစ်ဆင်ရေးမှူး ဂျီထူး ဗိုလ်မှူးဆန်းအောင် ဦးဆောင် သည့် ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့သည်လည်း စစ်အစိုးရ၏ ဗျူဟာအဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီး မနေ့မနက်(၁၀) နာရီက နေစပြီး တိုက်ပွဲကြိုကြား ဖြစ်နေသည်ဟု ဗိုလ်မှူး ဆန်းအောင်ပြောပါသည်။
“လက်ရှိအနေအထားက ဟိုးတောင်အောက်မှာ ထမင်းချက်တဲ့ အုပ်စုကတစ်အုပ်စု၊ ဟိုးတောင် ထိပ်မှာကတစ်အုပ် ၊ ထမင်းချက်တဲ့အုပ်နဲ့ ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဗျူဟာနဲ့ သူတို့ကြားထဲမှာ ကျနော်တို့ အဲဒီကြားထဲမှာ ဖြတ်ထားတယ်နော်။ အခုအချိန်အထိ သူတို့အချင်းချင်း အဆက်အသွယ်မရသေးဘူး”
မြ၀တီမြို့နယ်ဘက်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်နှင့် ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့တို့အကြား တိုက်ပွဲအခြေအနေမှာ ဆက်လက်တင်းမာလာမည့် အနေအထားရှိနေမည်ဟု ဒီကေဘီအေအရာရှိတစ်ဦးမှပြောပါသည်။
တိုက်ပွဲစဖြစ် ပွါးချိန်ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်သော်လည်း စစ်အစိုးရ၏စစ်ကူတပ်များ အခုအချိန်အထိ ဝေါ်လေစခန်းကို ရောက်ရှိခြင်း မရှိသေးဟု ဒေသခံတစ်ဦးမှပြောပါသည်။
တချိန်တည်းတွင် ဝေါ်လေစခန်းမှစစ်အစိုးရတပ်တွေကို ဒီကေဘီအေ တပ်ရင်း (၉၀၉) ဒုတပ်ရင်းမှူးဗိုလ်မှူးချမုစေး ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့က မကြာမကြာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေသည်ဟု ဒေသခံများမှပြောပါသည်။
အဆိုပါတိုက်ပွဲအကျိုးဆက်ကြောင့် ဝေါ်လေရွာတွင်ရှိသော ဒီကေဘီအေ တပ်စုမှူး စောလှခိုင်၏အိမ်ကို ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက်နေ့ ည (၇) နာရီအချိန်မှာ စစ်အစိုးရတပ်မှ မီးရှို့လိုက်သည်ဟု ဒီကေဘီအေ အရာရှိတစ်ဦးမှပြောပါသည်။
Posted by KCA.UK at 00:510comments
Karen Community Association UK members met with Elders' Policy Officer and Communication Assistant.
Posted by KCA.UK at 12:380comments
နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေတိုက်ပွဲ ပိုမိုပြင်းထန်၊ နအဖတပ်အင်အားတိုးချဲ့
Posted by KCA.UK at 19:010comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မင်းသမီး မစ်ရှဲလ်ယိုနှင့်တွေ့ဆုံ
Posted by KCA.UK at 16:450comments
ဖမ်းဆီးခံ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင် စီအဖွဲ့ဝင် ၆ဦး၏ အလောင်းပြန်လည် တွေ့ရှိ
ဒီဇင်ဘာလ ၇ရက်။ နန်းထူးစံ (ကေအိုင်စီ)
ပြီးခဲ့သည့် လကုန်ပိုင်းက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ကေအဲန်ယူ/ကေအဲန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ၆ဦး၏အ လောင်းကို ယနေ့မနက်တွင် ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီခရိုင်၊ ပလောတပို့ရွာနှင့် မနီးမဝေး ပြောင်းခင်းတခင်းတွင် ဒေသခံရွာ သားများက တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လက်များကို ကြိုးချည်ထားပြီး မီးရှို့သတ်ထားသည့် အဆိုပါ အလောင်း ၆လောင်းကို ကရင်ပြည်နယ် ပလောတပို့ရွာ ကျေး ရွာနှင့်မနီးမဝေး ပြောင်းခင်းတခင်းတွင် ရွာသူရွာသားများက ယနေ့မနက်၌ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တိုက်ပွဲကြောင့် ထိုင်း ဘက်ခြမ်းကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့် ပလောတပို့ရွာသူတဦးက ပြောသည်။
သူမက “ဒီမနက် စောစောမှာ တချို့ရွာသားတွေ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ခြံတွေ ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့။ ပြန်သွားတာ ပလောတပို့ရွာနဲ့ မနီးမဝေး တဘလူ့ကို့ထဲဒေသမှာရှိတဲ့ ပြောင်းခြံမှာတွေ့တာ။ အကုန်လုံး ၆ယောက်။ ၃ယောက်တစ်တွဲကို လက်တွေ ကြိုး ချည်ထားပြီးတော့ မီးရှို့ထားတယ်။ တကိုယ်လုံး မည်းနေတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ မသိတော့ပေမဲ့ သူတို့အင်္ကျီမှာ ငြိမ်း ချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ တံဆိပ်ပါတယ်။ ရွာသားတွေက သေသေချာချာကို သွားကြည့်တာ။ အနံ့တောင် ထွက်နေပြီး”ဟု ကေအိုင်စီ ကို ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့မနက် ၉နာရီအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီခရိုင်ရှိ ဖလူးကလေးဒေသအတွင်းရှိ ဗိုလ်မှူးတဲခီး ဦးစီးသော ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို နအဖ ခမရ(၂၄၀)တပ်ဖွဲ့က ၀ိုင်းပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တပ်သား ၁ဦးကျဆုံးကာ ၆ဦးမှာ အဖမ်းဆီးခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကေအဲန်ယူ/ကေအဲန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ စစ်ထောက်ချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် စောရင်နုက “ရွာသားတွေ ကျနော်တို့ကို ပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့လူတွေ နအဖက သတ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ယခုလဆန်း ၂ရက်နေ့က ကျနော်တို့ သိရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နအဖ တာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးတော့ ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီလို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တို့လူတွေ သူတို့ကို ဘာမှသွားလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ဒီလိုလုပ်တာ မကောင်းဘူး။ ဒါ ကျနော်တို့အပေါ် သက်သက် ညှင်းဆဲတာ ပဲ။”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
နအဖ စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးပစ်သတ်ခံရသည့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၆ဦးမှာ စောပီလင်း၊ စောနိုင်းနိုင်း၊ စောအ ၀င်း၊ စောထူးထူး၊ စောရန်ကုန်နှင့် စောသံခဲတို့ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မြ၀တီခရိုင်ရှိ ဖလူးဂွင်အတွင်း လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၄ရက်နေ့ကစပြီး နအဖ စစ်တပ်နှင့် ဒီကေဘီအေ တပ်မ ဟာ(၅) တပ်ဖွဲ့တို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒေသခံ ရွာသူရွာသားများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီး လက်ရှိအချိန် တွင် တချို့သော ရွာသူရွာသားများ ပြန်လည် နေထိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း တချို့မှာမူ မပြန်ရဲသေးဘဲ ထိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် ခိုလှုံ နေဆဲဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
<a href="http://www.geovisite.com/zoom.php" target="_blank"><img src="http://geoloc15.geovisite.com/private/geocounter.php?compte=617541965391" border="0" alt=""></a><br> Please do not change this code foraperfect fonctionality of your counter <a href="http://www.geovisite.com/">widget</a>
Posted by KCA.UK at 16:380comments
သန်းထိုက်ဦး Monday, 06 December 2010 17:24
စစ်အစိုးရတပ်နှင့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ မြ၀တီမြို့နယ် အတွင်းရှိ မေတ္တာလင်းမြိုင်ဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ ကြောင်းသိရသည်။
မြဝတီ မြို့နယ်အတွင်း စစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA တပ်များ တိုက်ပွဲ ဆက်တိုက် ဖြစ်နေသောကြောင့် ဒုက္ခသည်များလည်း ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ပြေးဝင် ခိုလှုံနေရဆဲဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
မေတ္တာလင်းမြိုင်ဒေသ၌ ယနေ့ နံနက် ၅ နာရီခန့်တွင် နအဖ စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးများဖြင့် အချက် ၂၀ ခန့် ပစ်ခတ် ကြောင်း ယင်းကျေးရွာအနီးရှိ ဒေသခံများက ဆိုသည်။
ယနေ့တိုက်ပွဲများကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများ မရှိသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့မှ စတင်၍ ထွက်ပြေးလာသူ လူဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော် ရှိနေသေးကြောင်း၊ ထွက်ပြေးလာသော စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို ထိုင်း အာဏာပိုင် များက ထိုင်းနယ်ခြားစောင့် စခန်းဝန်းအတွင်း စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်း ဒုက္ခသည်များကို ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဒုက္ခသည်များ ထားရှိရာသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး အလျင်စလို ပြန်ပို့ရန် မလိုအပ်သေးကြောင်းနှင့် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အခြေအနေ ရှိနေသေးကြောင်း ပြောသွားသည်ဟု သိရသည်။
ထွက်ပြေးလာသော ကရင်ရွာသားများကို မဲဆောက်မြို့ရှိ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသော NGO အဖွဲ့ အစည်း တချို့က အစားအသောက်များ ကူညီထောက်ပံ့ပေးထားသည်ဟု မဲဆောက်မြို့ခံများက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပေးရောက်ရှိလာသော ဒုက္ခသည် များကို အချိန်မတန်သေးဘဲ ပြန်မပို့ရန် လူ့အခွင့်အရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး (HRW) အဖွဲ့က ထိုင်း အာဏာပိုင်များအား ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က တောင်းဆိုထားသည်ဟု သိရသည်။
HRWမှ အာရှရေးရာ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဆိုဖီ ရစ်ချတ်ဒ်ဆန်က “မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲမှာ အရပ်သားတွေကို ထိခိုက်မှု မရှိအောင် နှစ်ဘက်လုံးက အလေးထားတာမျိုး မပြခဲ့ဘူး”ဟု ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ် မြ၀တီမြို့နယ် အပါအ၀င် ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်နှင့် ကြာအင်း ဆိပ်ကြီးမြို့ နယ်များတွင် စစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA တပ်မဟာ ၅ တို့ တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် နေ့စဉ်နီးပါး တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
တိုက်ပွဲများသည် ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီနှင့် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်များရှိ ဝေါ်လေ၊ ဖလူး၊ မင်းလက်ပံ၊ မေတ္တာလင်းမြိုင်စသည့် ကျေးရွာ ဝန်းကျင်ဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရသည်။
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) မှ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်မှူး စောလှငွေက သင်္ကန်းညီနောင်၊ ဖလူး၊ မယ်သဝေါနှင့် မာနယ်ပလောဒေသ တလျှောက်တွင်လည်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား လာနိုင်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ရန်သူ (နအဖ တပ်တွေ) က အဲဒီဘက်တွေမှာ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ DKBA ကလည်း မညီညွတ်တော့ဘူး ဆိုတော့ ကျနော်တို့
ဘက်က ပျောက်ကျားစနစ်နဲ့ လစ်တာနဲ့ ထတိုက်မှာပဲ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ပျောက်ကျား တပ်များကို အဆိုပါဒေသများသို့ ထပ်မံ တိုးချဲ့ရန် ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် KNU လက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA) တပ်မဟာ (၅)၊ တပ်မဟာ (၇) လက် အောက်ခံ တပ်ရင်း (၂၀၂)၊ တပ်ရင်း(၂၂) တပ်များပူးပေါင်းကာ လှုပ်ရှားနေကြောင်းလည်း KNLA အသိုင်းအ၀န်းနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းထားသော နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင် အများစုက ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် လကုန်ပိုင်းတွင် လက်ခံ ခဲ့ကြသော်လည်း ဗိုလ်မှူးကြီး စောလားပွယ် (ခေါ်) ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး၏ တပ်ဖွဲ့ကမူ ယင်း အစီအစဉ်ကို သဘောမတူ သောကြောင့် ခွဲထွက်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး စောလားပွယ် တပ်ဖွဲ့သည် ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်များတွင် လှုပ်ရှားနေသော တပ် ဖွဲ့ဖြစ်သည်။
DKBA သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) မှ ခွဲထွက်ပြီးနောက် စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲကာ တဖြည်းဖြည်း အင်အား ကြီးမားလာသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။
Posted by KCA.UK at 22:560comments
ရဲဘော်ကျော်သန်း၏ ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာတပိုင်းတစအမြင် ( တကယ်ညီညွှတ်ချင်ရင် ရန်သူအစစ်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်)
Posted by KCA.UK at 22:520comments
မဲန်ဒဲလား ထောင်သက် ၂၇နှစ်ကျော်၊ လွတ်။ ကရင်ရဲဘော်လေး တူးကီ ထောင်သက် ၂၈ နှစ်ကျော်၊ နေဆဲ။
မဲန်ဒဲလား ထောင်သက် ၂၇နှစ်ကျော်၊ လွတ်။
ကရင်ရဲဘော်လေး တူးကီ ထောင်သက် ၂၈ နှစ်ကျော်၊ နေဆဲ။
နယ်လ်ဆင်မဲန်ဒဲလားက ထောင်ထဲမှာ ၂၇နှစ်ကျော် နေခဲ့ရတယ်။ ထောင်ထဲ နှစ်ရှည်နေရတာကြောင့်ရော၊ သူ့ရဲ့ လေးစားဖွယ်လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ရော ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တယ်။
ကရင်တော်လှန်ရေး ရဲဘော်လေး တူးကီ ခေါ် ခင်မောင်လင်း ထောင်ထဲ ရောက်နေတာ ၂၈ နှစ် ကျော်လာပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒါကို အလွန် လူသိနည်းလှပါတယ်။ သူ့သက် ၂၀ မပြည့်သေးချိန် ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ စတင် အကျဉ်းချခံရတာပါ။
နိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုနေသလို ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် လွတ်မြောက်လာရင်တော့ တူးကီလည်း လွတ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ဝင်လိုက်ကြ ထွက်လိုက်ကြနဲ့ ရှိနေပေမယ့် မန်းငွေအောင် အမှုတွဲ တူးကီကတော့ အိမ်ရှင် အကျဉ်းသားကြီးဖြစ်လို့ ဧည့်သည်တော်များကို တယောက်ပြီးတယောက် ဧည့်ခံနေရသူပါ။
အာဟာရမဲ့ ခြုံပုတ်ပြုတ်ရည်၊ ဒေါက်၊ ခြေကျင်းနဲ့ ကျားတွေ ခြသေ့င်္တွေလို နှစ်ရှည်လများ တိုက်ပိတ်၊ တနေ့ကို ၁၀ မိနစ်လောက် မြေကြီးနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရ ဆိုတာတွေဟာ တူးကီရဲ့ ထောင်သက်၂၈နှစ်ကျော် မှတ်တမ်းတွေပါပဲ။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် အင်းစိန်ထောင်ကနေ ရက်စက်ပူပြင်း သရက်ထောင်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီး လွတ်ရက်လည်း မသိ၊ တူးကီ လွတ်မြောက်ရေး ဆိုပြီး သီးခြား တောင်းဆိုတာလည်း မရှိသေးလို့-
ကရင့်တော်လှန်ရေး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တူးကီကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါလို့ ဒီကနေ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
တူးကီ နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး ချက်ခြင်းလွှတ်
ဘဝတူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ရဲဘော်
Posted by KCA.UK at 09:190comments
တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၁၄ရက်။ဒီဇင်ဘာ ၅၊၂၀၁၀။
မင်းချမ်း(ဒီဇင်ဘာ-၅)။ ။ ဘုရားသုံးဆူ၊ ထိုင်းနယ်မြေကိုဝင်ရောက်လာသော မြန်မာစစ်အရာရှိနှစ်ဦးတို့သည် ဗျူဟာမှူးသတင်းသိရှိသွားသဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးဂတုံးတုန်းရိပ်ကာ အပြစ်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါဖြစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူအမည်မဖေါ်လိုသူတစ်ဦး ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်စပ်အနီး ဘုရင့်နောင်ကုန်းတွင် စခန်းချလျှက်ရှိသော ခမရ ၄၁၀ စစ်ကြောင်း ၂ မှူးဖြစ်သူ ဒုရင်းမှူးဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းထွန်းနှင့် ၄င်းတပ်ဖွဲ့မှဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးတို့သည် ယခုလ ၃ ရက်နေ့၊ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ထိုင်းနယ်မြေဘုရားသုံးဆူသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဗျူဟာမှူးသိသိချင်း ဒေသခံထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရယူပြီး ဒီအရာရှိတွေမြန်မာပြည်ဖက်ကို ပြန်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်၊ ဒီရောက်တော့ ထိပ်တုန်းခတ် ဂတုံးတုန်းရိပ်အပြစ်ပေးလိုက်တယ်” ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါမြန်မာအရာရှိနှစ်ဦး ထိုင်းနယ်မြေသို့ရောက်ရှိလာပြီး ၄င်းတို့အရာရှိပြန်ခေါ်သွားသည်မှာမှန်ကန်ကြောင်း ဒေသခံထိုင်းအာဏာပိုင်တစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ခမရ ၄၁၀ စစ်ကြောင်း ၂ ကို ထိုင်းနယ်စပ်နှင့်ဝေးရာ ဘုရားသုံးဆူမြို့အပြင်ဖက် ရွာသစ်နှင့်ကျုံကွီးရွာဖက်တွင် ဗျူဟာမှူးဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းဇော်က အမိန့်ပေးပြောင်းရွေ့လိုက်ကြောင်း ဒေသအတွင်း မြန်မာတပ်ဖွဲ့များလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လှန်းနေသူ ကေအဲန်ယူတပ်မဟာ ၆ ပြောခွင့်ရဗဒိုစောထဲနေက ပြောသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်တွင် ထိုင်းနယ်မြေသို့လိုက်ပါပို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူ ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးအပြောအရ ဗျူဟာမှူးနဲ့အထက်အရာရှိများထံသတင်းပေါက်ကြားခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါမြန်မာစစ်အရာရှိနှစ်ဦး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းသို့ တနည်းနည်းဖြင့်ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားနေစဉ် မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ထိုင်းနယ်စပ်ရောက် မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ တပ်ပြေးဝင်ရောက်မှုများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၊ ယခုအခါ မဟာချိုင်ဒေသတွင် မြန်မာတပ်ပြေးများ ထောင်ဂဏန်းအထိပင်ရှိနေကြောင်း သတင်းများတွင်ရေးသားဖေါ်ပြကြသည်။
Posted by KCA.UK at 21:460comments
မြ၀တီမြို့နယ်အတွင်း နအဖတပ်နှင့် ဒီကေဘီအေတပ်များ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေဆဲ
နော်အဲဏီ(ဒီဇင်ဘာ-၅)။ ။ နအဖတပ်များနှင့်ဒီကေဘီအေတပ်များ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း၌မြ၀တီမြို့နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများဆက်လက် ဖြစ်ပွါးနေဆဲဟုဒီကေဘီအေတပ်မှူးတစ်ဦးမှပြောပါသည်။
မြ၀တီခရိုင်၊ ဝေါ်လေကျေးရွာတွင် စခန်းချနေသော နအဖတပ်ကို ဒုတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးစောချမုစေး ၊ တပ်စုမှူးစောလှခိုင် ဦးဆောင်သော ဒီကေဘီအေ(၉၀၉) တပ်နဲ့ ကေအဲန်ယူ တပ်ရင်း (၂၀၁)က ပူးပေါင်းပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့ ည (၁၁း၃၀) အချိန်တွင် (၁၅)မိနစ် ခန့် သွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ဒုတပ်ရင်းမှူး စောချမုစေးက ပြောပါသည်။
အလားတူ လွန်ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့ကလည်း မြ၀တီခရိုင် ဖလူးစခန်းထိုင် အင်အား (၃၀) ခန့်ရှိသည့် ခလရ (၆၁) ၊ ခမရ (၂၃၀)ရိက္ခာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကို ဒီကေဘီအေ ဗျူဟာ(၁) အဖွဲ့နဲ့ ကေအဲန်ယူပူးပေါင်းပြီး ၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါသေးသည်ဟု ဒီကေဘီအေဗျူဟာ(၁)စစ်ဆင်ရေးမှူး ဗိုလ်မှူးဆန်းအောင်က အခုလို ပြောပြပါသည်။
“ကျနော်တို့ရန်သူရိက္ခာကားကို ၀င်ရောက်စီးနင်းဖို့ ကျနော်တို့ ဖလူးစခန်းကို ကပ်သွား တယ်နော်၊ ကပ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာ သူတို့ကပစ်ခတ်မှုတွေ အရင်ပစ်တယ်နော်။ သူတို့က ကတုတ်ကျင်းနဲ့ ဆက်သွယ် ရေးကျင်းနဲ့ဆိုတော့ ကျနော်တို့က ပြန်မပစ်ပဲ နားထောင်နေတယ်၊ ကျနော်တို့က(၂ )ချက်ပဲပစ်တယ် သူတို့က အလုံး(၂၀)လောက်ပစ်တယ်နော်။ (၁၁)နာရီမထိုးခင်ကနော် စတာနော်။ ခုနကကျနော်တို့ ပြန်ဆုတ် လာတာ(၁)နာရီနဲ့မိနစ်(၄၀)မှာ ကျနော်တို့ ပြန်ဆုတ်လာတာနော်၊ ကျနော်တို့ ဆုတ်နေတဲ့အချိန်မှာ လည်း သူတို့ပစ်နေသေးတယ်၊ သူတို့ပစ်တာ ဟို အိပ်မှုန်စုံမွားနဲ့ ဘယ်မှာရှိမှန်းသူတို့မသိဘူး။ လက်နက်ကြီးဟာ ဘယ်ရောညာရော အရှေ့ကိုပစ်တယ် အနောက်ဘက်မှာက ယိုးဒယားချောင်းခံနေတာကိုး။ ကျနော်တို့က မပစ်ဘူးဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဘယ်နေရာမှာရှိမှန်း သူတို့မသိဘူးပေါ့”
ဝေါ်လေစခန်းတွင် ရိက္ခာအခက်အခဲ ဖြစ်နေသော နအဖတပ်ဖွဲ့ကို ယနေ့အထိ ရိက္ခာမပို့ပေးနိုင် သေး ကြောင်း စစ်တပ်နှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးမှပြောပါသည်။
မြန်မာပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေသောစစ်အာဏာရှင် (ပုံ-ခင်မောင်ဝင်း၊ အေဗီ)
ထို့အပြင် ယခုထိုးစစ်ဆင်နေသော နအဖတပ်များ အနေ နှင့် စစ်ကူအင်အားနည်းသဖြင့် ရိက္ခာမပံ့ပိုးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းပြောပါသည်။ ဒီကေဘီအေမှလည်း ဤအချက်ကို အကြောင်းပြု၍ ကြားဖြတ်ထိုးစစ်ဆင်နေပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ(၃)ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာ များတွင် ဒီကေဘီအေမှ ဗိုလ်မှူးမန်းသိန်းဦးစီးအင်အား(၁၃)ယောက် လက်နက်ချ သည်ဟူသောသတင်းကို ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။
သို့သော်လည်း ယခု အစိုးရတိုက်တွန်းထားသော နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို လက်မခံ သည့်ဒီကေဘီအေအဖွဲ့မှ မဟုတ်ဟုသိရပါသည်။
Posted by KCA.UK at 21:420comments
ခင်ညွှန့်ကို ခေါ်ဆောင်သွားစဉ် (အသံပါဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း)
Posted by KCA.UK at 11:180comments
Posted by KCA.UK at 01:160comments
Posted by KCA.UK at 23:100comments
Thai troops are seen escorting refugees who escaped fighting in November toashelter in Mae Sot (Reuters)
Reports are emerging that suggest the Thai army is blocking refugees from escaping conflict in eastern Burma and ordering those that had fled across the border to return.
Fighting has intensified in recent days close to the border, as the Burmese army continues to houndabreakaway Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) faction. Heavy artillery fire was heard towards the end of last week and sporadic bursts of fighting have continued.
Of the 1,200-odd refugees that crossed into Thailand over the weekend, the majority have returned. But aid workers claim groups are continuing to move back and forth across the border as stability in the area south of Myawaddy remains fragile.
Posted by KCA.UK at 20:440comments
Posted by KCA.UK at 14:460comments
သူတို့နိုင်ငံက ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို သနားကြင်နာပေးဖို့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုင်းတွေကို တနေ့က တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
“ထိုင်းနိုင်ငံအတွေက် အခြေအနေတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ မလွယ်ဘူး ဆိုတာ ကျမတို့ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေအတွက် ရှင်တို့လုပ်နိုင်တာကို လုပ်နေနိုင် တယ်ဆိုရင် ကျမတို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်နေမှာပါ” လို့
ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ထိုင်းအာဆီယံ သတင်းအေဂျင်စီနဲ့ ဖုန်းအင်တာဗျူးတုန်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာဒုက္ခသည် ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကို ခိုလှုံခွင့်ပေးထား တာ ဆယ်စုနှစ် ၂ နှစ်ကျော်ပါပြီ။ လောလောဆယ်ဆယ် မြန်မာနိုင်ငံက ရွှေ့ပြောင်းအ လုပ်သမား ၂ သန်းလောက်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။
မကြာခင်က နယ်စပ်တလျှောက်မှာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ် တုန်းက နောက်ထပ်မြန်မာပြည်သားတွေ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒီလအစောပိုင်းက နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်လာခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်သူတွေကို ကူညီတဲ့အတွက် ထိုင်းလူမျိုးတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောခဲ့ ပါတယ်။
“ကျမတို့ဟာ ရှင်တို့နဲ့ မိတ်ဆွေကောင်း၊ အိမ်နီးခြင်း ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျမတို့ သိ စေချင်ပါတယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သားတွေကိုလည်း သူက စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကိုမမေ့ပါဘူး၊ မြန်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အိမ်ပြန်ခေါ်ဖို့ သူလုပ်နိုင်တာတွေကို လုပ်ပါမယ်လို့ ကတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နောက်ပြီး စစ်အစိုးရနဲ့တင် ဆက်သွယ်နေယုံမကဘဲ တိုင်းပြည်ကို ဒီမိုကရေစီရအောင် လုပ်နေတဲ့ အတိုက်အခံတွေနဲ့လည်း ဆက်သွယ်ဖို့ ထိုင်းအစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
“အစိုးရအားလုံးကို မြန်မာအစိုးရနဲ့သာမက ကျမတို့နဲ့လည်း ဆက်ဆံစေချင်ပါတယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် မြှုပ်နှံလုပ် ကိုင်နေတဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရခဲ့တဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဟာ တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက နေ ပါဝင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၀ (The Nation)
Posted by KCA.UK at 14:370comments
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ၆ဦး နအဖ ဖမ်းမိ၊ တဦး ပစ်သတ်ခံရ
Submitted by Karen Information Center on Tuesday, 30 November 2010No Comment
နိုဝင်ဘာလ ၃၀ရက်။ နန်းထူးစံ (ကေအိုင်စီ)
ကေအဲန်ယူ/ကေအဲန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆ဦးကို ယနေ့မနက်တွင် နအဖ စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး ၁ဦးကို ပစ်သတ်လိုက်သည်ဟု ကေအိုင်စီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယနေ့မနက် ၉နာရီကျော်အချိန်၌ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီခရိုင်ရှိ ဖလူးကျေးရွာနှင့် မနီးမဝေး ပလောတပို့ဒေသတွင် လှုပ်ရှားသည့် ဗိုလ်တဲခီး ဦးစီးသော ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို နအဖ စစ်ကြောင်းက ၀ိုင်းမိပြီး ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၁ဦး ကျဆုံးကာ ၆ဦးမှာ အရှင်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ကေအဲန်ယူ/ကေအဲန်အယ်လ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိသူ စောတီမသီက “ဒီမနက် ကျနော်ကြားတာ က ဗိုလ်တဲခီးရဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆ဦးကို နအဖ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးတယ်။ ၁ဦးကို ပစ်သတ်လိုက်တယ်လို့ ကြားတယ်။ ဒါပေမယ့် အသေး စိတ်တော့ မသိသေးဘူး။”ဟု ကေအိုင်စီကို အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
ဖလူးဒေသတွင် လှုပ်ရှားနေသည့် ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက “အခု နအဖတွေက ဝေါ်လေကို တက်ဖို့လေ။ သူတို့ တက်လာတဲ့ လမ်းတလျှောက်မှာ သေနတ်လိုက်ပစ်တယ်။ ဖလူးအပေါ်ဘက် ပလောတပို့မှာ သူတို့(ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့)ကို စစ်တပ်က တွေ့ပြီးတော့ ၀ိုင်းလိုက်တာလို့ ကျနော်ကြားတယ်။ အဲဒီမှာရှိတဲ့ သူတို့အဖွဲ့က လူနည်းတယ်လေ။”ဟု ပြောသည်။
(နယ်စပ်တနေရာတွင် စစ်ရေးပြင်ဆင်နေသူ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး)
လက်ရှိအချိန်တွင် ဖလူးဒေသ၌ နအဖ စကခ(၈)လက်အောက်ခံ ခလရ(၆၂) လှုပ်ရှားလျှက်ရှိပြီး ထိုတပ်ရင်းသည် နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ဝေါ်လေဒေသသို့သွားရန် ဖလူးကျေးရွာတွင် ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်သော်လည်း ရှေ့ဆက်သွားမည့် လမ်းကြောင်းများကို ဒီကေဘီအေတပ်နှင့် ကေအဲန်အယ်လ်အေတပ်ဖွဲ့များ ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် ဝေါ်လေလမ်းကြောများကို လက်နက်ကြီးများဖြင့် လိုက်လံပစ်ခတ်လျှက်ရှိကြောင်း အဆိုပါကေအဲန်အယ်လ်အေတပ်သားက ပြောသည်။ ယင်းသို့ ဖမ်းဆီး၊ ပစ်သတ်ခံရသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင်ထဲတွင် ဗိုလ်တဲခီး ပါဝင်ခြင်း မရှိသလို ထိုအဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ ဗိုလ် ချုပ်စောထင်မောင်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်စောရင်နုတို့ကို ဆက်သွယ်မရခဲ့ပေ။
Posted by KCA.UK at 15:020comments
တလောက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ တထောကြီး အရပ်ဝတ်လဲလိုက်ရသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ဆက်စပ်သည့်
အကြောင်းအရာတခုကို ဦးလေးကြီးက စကားပြောလို၏။
“စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ စစ်ယူနီဖေါင်း အချွတ်ခံရတော့ သူတို့စိတ်တွေ ဘယ်လောက်ထိ ဗျောင်းဆန်ကုန်တယ်ဆိုတာ ပြောပြချင်တယ်”
ကိုတူမောင်၏ မှေးနေသောမျက်လုံးများက ပြူးသွားသည်။ စေ့ထားသောနှုတ်က ပွင့်သွားသည်။
“ဟုတ်တယ်..ကိုတူမောင်။ ဘယ်ဗိုလ်ချုပ်.. ဘယ်လိုဂျွမ်းပစ်သွားတယ်ဆိုတာကို ကြားရရင် ပိုပြီးတော့
ဦးလေးကြီးက “ချောပါတယ်ဆိုကာမှ ရေမချိုးရသေးဘူး” လုပ်နေသည်။
“ကိုတူမောင်.. ရေ။ ဗိုလ်သိန်းစိန်က ဒီပွဲမှာဈေးဦးပေါက် အချွတ်ခံရတာ။ ဒါကြောင့်.. ဗိုလ်သိန်းစိန်အကြောင်းက စမယ်”
“နေပါဦး..ဦးလေးကြီး..ရဲ့။ ဗိုလ်သိန်းစိန်က ဗိုလ်သန်းရွှေမိသားစုရဲ့ လူယုံတော်မဟုတ်လား။ သားရေးသမီးရေးဆိုတဲ့ တကယ့်အတွင်းရေးကိုတောင် အတွင်းလူအဖြစ်နဲ့ ရှင်းပေးနေရတာ။”
“ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်..ကိုတူမောင်။ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်စစ်တပ်ထဲမှာက ရဲဘော်ရဲဘက်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးသက်သက်ကိုပဲ ကြည့်ကြတော့တာ။ ဒီကနေ့အနီးဆုံးလူ ဖြစ်ပေမယ့် မနက်ဖြန် အဝေးဆုံးလူ ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားရော။ ဒီကနေ့အဝေးဆုံးလူက တော်ကြာ အနီးဆုံးလူဖြစ်ချင် ဖြစ်လာတာ။ ရှေးစကားရှိတယ်လေ၊မင်းခယောကျာ်း ကမ်းနားသစ်ပင် တဲ့။”
ဦးလေးကြီးက တရားသဘောကိုနှော၍ပြောပြီး စကားကိုဆက်သည်။
“ဗိုလ်သိန်းစိန်ရဲ့အဖြစ်က..ဒီလို။ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်သာဆိုတယ်၊ ဘယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကမှ အစိုးရအဖွဲ့ထဲက မထွက်ဘူး။ဒီတော့ ဝေဖန်ပြစ်တင်သံတွေက ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း ထွက်လာပါလေရော။ ကံကြမ္မာကဖန်လာတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေက.. ဗိုလ်သိန်းစိန်ကို ချကျွေးလိုက်ရတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်က ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်ဖြစ်သွားပါလေရော။ဒီပွဲမှာ.. ဗိုလ်သိန်းစိန်က ပထမဦးဆုံး ဓါးစာခံအဖြစ်ခံသွားရတာ။ တကယ်တော့ ဗိုလ်သန်းရွှေက မိုးကြိုးပစ်တာကို ထန်းဖလက်နဲ့ ကာတာပါ။ အဲဒီတုန်းက ဗိုလ်သိန်းစိန် ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကိုတူမောင် တွေးကြည့်စမ်းပါ။”
ဦးလေးကြီးက ကိုတူမောင်၏ နှလုံးသားကို တို့ပေးလိုက်သည်။ ကိုတူမောင်က ငေး၍သာနေသည်၊ ဘာမျှမတုန့်ပြန်။သည်တော့.. ဦးလေးကြီးကပင် ရှေ့ဆက်လေသည်။
“ကိုတူမောင်..ရေ။ တရားအင်မတန်ကျဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။ ဗိုလ်သိန်းစိန်ဟာ.. နောက်နေ့ဆို အရပ်သားဝတ်စုံကို ပြောင်းပြီးဝတ်ရတော့မယ်။ ဒါကြောင့် နောက်နေ့မရောက်သေးမီ ကာလအတွင်းမှာ စစ်ဝတ်စုံကြီးကို မချွတ်တော့ဘူး။တညလုံး စစ်ဝတ်စုံကြီးနဲ့ပဲ အိပ်တော့တယ်။”
“ကိုတူမောင်က.. အရပ်သားကိုး။ ဗိုလ်သိန်းစိန်ရဲ့အဖြစ်ကို အရပ်သားတွေက ဘယ်လိုလုပ်ပြီးခံစား နားလည်နိုင်မှာလဲ။ဒီတော့.. သို့လော..သို့လော.. ဖြစ်ပြီပေါ့။ စစ်ဗိုလ်အချင်းချင်းကမှ ဘဝတူချင်းမို့ ခံစားနာလည်နိုင်တာ။”
ဦးလေးကြီးပြောတာ ဟုတ်သလိုလိုပါလားဟု ကိုတူမောင်က ဆင်ခြင်သမှုပြုမိ၏။ ဦးလေးကြီးကတော့ ပုံပေါ်အောင် ဆက်၍ဖေါ်လေသည်။
“စစ်ဗိုလ်လူတန်းစားဟာ စစ်ယူနီဖေါင်းကို အရင်းပြုပြီး သူဌေးသမီးကိုလည်း ယူနိုင်တယ်။ တက္ကသိုလ်ကဆရာမ၊ရုံးကြီးတွေက အရာရှိမတွေကိုလည်း ယူနိုင်တယ်။ ဆရာဝန်ချင်း အတူတူမို့.. ဟဲ..ဟဲ.. ယောကျာ်းဆရာဝန်ကို လင်မတော်ချင်တဲ့ ဆရာဝန်မတွေကိုလည်း ယူနိုင်တယ်..ဟဲ..ဟဲ..။ မင်္ဂလာဆောင်စရိတ်ကို ကိုယ်ကမထုတ်ရဘူး။ယောက်ခမလောင်းက ထုတ်ပေးတယ်..ဟဲ..ဟဲ..။ ဒါတွေက စစ်ဗိုလ်ဖြစ်စ.. အကင်းကလေးဘဝမှာ ရခဲ့တဲ့အခွင့်ထူး။ အဲ.. အကင်းကလေးဘဝက
ဦးလေးကြီးက စကားကို တန်းလန်းလုပ်ပြီး အမောဖြေသည်။ ကိုတူမောင်ခမျာ.. မစပ်တငံ့.. စပ်တငံ့။ အမောကလေးပြေတော့ ဦးလေးကြီးက စကားစကို ဆက်သည်။
“အင်း.. ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်လာတော့ တချက်လွှတ်အာဏာ ရလာတယ်။ အဲဒီတချက်လွှတ် အာဏာကိုသုံးပြီး နံပါတ် (၁) လူတကာကို ဂတုံးပေါ် ထိပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ကျစိုးမိုး လူပါးဝလို့ရလာတယ်။ နံပါတ် (၂) မမြင်ဘူး၊မကိုင်ဘူးတဲ့ဥစ္စာတွေ မတော်မတရား အလျှံပယ်ယူလို့ ရလာတယ်။ ဥစ္စာဆိုရာမှာ ရွှေ့ပြောင်းလို့မရတဲ့ဥစ္စာ၊ရွှေ့ပြောင်းလို့ရတဲ့ဥစ္စာ.. ဧရာမပိုင်ဆိုင်မှုကြီး။ အချုပ်စကားဆိုရရင် လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်တယ်..ဟဲ..ဟဲ..။ နတ်ဘုရားပေးတဲ့ အာဏာကို ပြဒါးရှင်လုံးလိုငုံပြီး ကောင်းကင်ဘုံက ဒိုက်ထိုးဆင်းလာတဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ်လိုလို.. ဘာလိုလို..ဟဲ..ဟဲ..။”
ဦးလေးကြီးကဖေါ်တော့ အကြေင်းရင်းက.. အရှင်းသား အထင်းသားပေါ်လာလေပြီ။
“ကဲ..ကိုတူမောင်၊ ဒါကိုကြည့်ရင် စစ်ဗိုလ်လူတန်းစားဟာ ဇနီးမယားကို မက်မပြေသလိုပဲ၊စစ်ဗိုလ်ဘဝ တလျှောက် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားပြီး ဝတ်လာခဲ့တဲ့ စစ်ယူနီဖေါင်းကို မက်မပြေအောင် မက်တော့တာပေါ့။”
“အင်း..ဦးလေးကြီးရေ၊ တကယ်တော့ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တဆိုတာ ဒါပဲကိုး”
“ကိုင်း..ကိုင်း..ကိုတူမောင်၊ စကားဝိုင်းကိုရပ်ကြစို့။ နောက်စကားဝိုင်းကျရင် စစ်အရေခွံ အချွတ်ခံရလို့ ဆားအတို့ခံရတဲ့တီကောင်လို ထွန့်..ထွန့်.. လူးသွားတယ်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်က သက်သေခံပါလိမ့်မယ်။”
ကိုတူမောင်က မနေနိုင်မထိုင်နိုင် နှုတ်ဆော့လိုက်မိသည်။
“ဟင်း.. ကိုတူမောင်က စကားအနှိုက်ကောင်းသကိုး။ ကဲ..ကဲ.. နောက်စကားဝိုင်းမှာ သက်သေခံမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဘယ်သူဆိုတာ အမြည်းကလေးသဘော ပြောပါ့မယ်။ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့တကွ မယ်မယ်ကြီးမွှေးထုံသင်းကြိုင်တို့၏ မွေးစားသားဖြစ်တော်မူထသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးပါခင်ဗျား.. ဟား..ဟား..”
Posted by KCA.UK at 14:170comments
A fresh outbreak of heavy fighting in eastern Burma has caused more thanathousand refugees to cross back and forth over the border with Thailand, barely three weeks afteramass exodus left 20,000 displaced.
Border flare-up sparks refugee turmoil thumbnail
The latest flare-up comes after weeks of low-intensity conflict between the Burmese army and the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), whose decision not to becomeaBorder Guard Force has angered the ruling junta.
Gunfire was heard on Saturday in Hpalu village, close to the border town of Myawaddy, which was the epicentre of the eruption earlier this month. Several artillery shells landed close to Hpalu, injuring at least one villager, the Karen Human Rights Group (KHRG) reported.
Refugees flee more fighting
Refugees flee more fighting from DVBTV English on Vimeo.
Posted by KCA.UK at 14:000comments
တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၈ရက်။နိုဝင်ဘာ ၂၉၊၂၀၁၀။
နော်အဲဏီ(နိုဝင်ဘာ-၂၉)။ ။ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့နှင့်(၁၃)မိုင်အကွာ ကြိမ်ချောင်းမရောက်ခင် ဇီးပင်အရှေ့ တဲသုံးလုံးတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ခလရ(၄၀၆)တပ်ရင်းနှင့် ဗိုလ်မှူးစောအေ၀မ်းဦးစီး ဒီကေဘီအေတို့ နိုဝင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့ ညနေ( ၃) နာရီ(၁၀)မိနစ်အချိန်မှာ မိနစ်(၂၀)ခန့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများမှပြောပါသည်။
စစ်အစိုးရတပ် ခလရ(၄၀၆)တပ်ရင်း အင်အား(၁၀၇)ယောက်နှင့် ခြုံခိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မြန်မာစစ်တပ် ဘက်က တစ်ယောက်ကျဆုံးပြီး နှစ်ယောက်ဒါဏ်ရာရသည်ဟု ဗိုလ်မှူးစောအေ၀မ်းမှပြောပါသည်။
“နအဖတပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေ တဲ(၃)လုံးမှာပစ်ကြတယ်နော်။ (၁၅)မိနစ် မိနစ်(၂၀) လောက်ရှိတာပေါ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တာ။ သူတို့ဘက်က တစ်ယောက်ကျဆုံးပြီး နှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်။ အဲဒီ(၄၀၆)အဖွဲ့တွေပေါ့။ သူတို့ဟာ ရင်ဘောင်တန်းတက်ပြီးလာတယ်လေ။ ရွာမ၀င်ခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီမှာပစ်ခဲ့တယ်။”
ဘုရားသုံးဆူမှ ခလရ(၄၀၅)နှင့်(၄၀၆)တပ်ရင်းနှစ်ရင်းသည် ကြိမ်ချောင်းသို့စစ်ချီတက်ရာတွင် တဲသုံးလုံး တွင်ရောက်နေသော ဗိုလ်မှူးစောအေ၀မ်းတို့က ကြိုတင်သတင်းရ၍ ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ခလရ(၄၀၆)သည် ကြိမ်ချောင်းသို့ ခရီးဆက်ရန်အတွက် လူနာထမ်းရန် တဲသုံးလုံးတွင် ပေါ်တာများလိုက်လံ ဖမ်းဆီးနေသည်ဟု မော်တော်ဆိုင်ကယ်အငှါးမောင်းသူတစ်ဦးမှပြောပါသည်။
ယခုအနေအထား၌ ဘုရားသုံးဆူမြို့နဲ့ဝန်းကျင်ဒေသတွင် မြန်မာစစ်အစိုးတပ်မှ တပ်အင်အား(၅)တပ်ရင်းအားဖြည့်ထားပြီးခွဲထွက်သွားသည့်ဒီကေဘီအေတပ်နှင့်ကေအန်ယူခေါ် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးတပ်ဖွဲ့များကိုလိုက်လံထိုးစစ်ဆင်နေသည့်အခြေအနေ ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေထပ်မံပြင်းထန်လာဦးမည်ဟု ထိုင်းနယ်စပ် စစ်ရေးအကဲခတ်သူများမှပြောပါသည်။
တောတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းတောတွင်းပျောက်ကြားစစ်ဆင်ရေးသာမက မြို့တွင်းပျောက်ကြားစံနစ်ပါ လုပ်ဆောင်လာ နိုင်မည့်အနေအထားမှာရှိသည့်အတွက်မြို့ခံပြည်သူများ၏လုံခြုံရေးအခြေအနေသည် အာမခံချက်မရှိနိုင်သေးသလို အကယ်၍တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာလျှင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များပိုပြီးတိုးလာမည့်အနေအထားမှာရှိ နေသည်ဟုပြောဆိုမှုများရှိနေပါသည်။
Posted by KCA.UK at 22:390comments
A KIA troop sifts through ammunition in Kachin territory (James Robert Fuller)
Privately-owned shops are being forced to close and visitors restricted from moving around Kachin state capital Myitkyina as the Burmese army ups pressure onaceasefire group there.
Around 30 shops were forced to close over the weekend,aMyitkyina resident told DVB. The majority of these were near toaBurmese army outpost and military training school.
“Apparently [it was done] for internal security in the army – to prevent being [sabotaged] whilst waging war at the frontline,” the man said. Tension is high between the ruling junta and the Kachin Independence Army (KIA), which has refused to transform intoapro-government border militia.
He added that commander-level army officials were not allowed to bring visitors to the outpost, while all civilians were banned from entering.
It follows heavy fighting earlier this month in Karen state, when forces fromabreakway faction of the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) captured key government positions in Myawaddy.
Last week an order was sent from Naypyidaw to the headquarters of the Kachin Independence Organisation (KIO), the political wing of the KIA, ordering it to close down all but three of its offices in the northern Burmese state. A key trade route that serviced KIA territory with goods from China was also blocked by the military.
That followed the death of two Burmese army troops, who were killed on 22 November after stepping onalandmine allegedly laid by the KIA. The incident has ratcheted up animosity between KIA and the junta, who agreedaceasefire in the mid-1990s that now appears tenuous.
Posted by KCA.UK at 20:590comments
ကရင်တပ်ဖွဲ့နှင့် ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် နအဖ ၃၀ဦးကျဆုံး
နိုဝင်ဘာလ ၂၉ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် ကရင်တပ်ဖွဲ့မှ နအဖနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF) ပူးပေါင်းတပ်တို့ကို ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ နအဖဘက်မှ (၃၀)ဦး ကျဆုံးခဲ့ပြီး လက်နက် (၃၀)လက် ကရင်တပ်ဖွဲ့မှ သိမ်းဆည်းရမိသည်ဟု သိရ သည်။
ယမန်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ကော့ကရိတ်အခြေစိုက် နအဖ စကခ(၁၂) လက်အောက်ခံ ခလရ(၂၃၁)တပ်ရင်းနှင့် BGF (၁၀၁၆)တပ်ရင်းတို့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အား တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်(ဒီကေဘီအေ) ကလိုထူး ဘောဗျူဟာ(၁)နှင့် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ကေအဲန်အယ်လ်အေ) တပ်ရင်း(၁၈)တို့ပူးပေါင်း၍ ခုဒုံနှင့် အောင်လိုင်ကျေးရွာ ကြားတနေရာတွင် ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဒီကေဘီအေ ကလိုထူးဘောဗျူဟာ(၁) စစ်ဆင်ရေးမှူး G2 ဗိုလ်မှူးစောဆန်းအောင်က ယခုလို ပြောသည်။
၎င်းက “မနေ့က နေ့လည် ၁၂း၀၀နာရီအချိန်မှာ ခုဒုံနဲ့ အောင်လိုင်ကြားက တောင်ကြားတနေရာမှာ တက်လာတဲ့ နအဖနဲ့ BGF စစ်ကြောင်းကို ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့က အပိုင်နေရာယူထားပြီးတော့ စောင့်ပစ်တယ်။ အဲဒီမှာ နအဖနဲ့ BGF တွေရဲ့ အလောင်း ၃၀ နဲ့ လက်နက်အလက် (၃၀)ကို ကျနော်တို့ဘက်က ကောက်ရခဲ့တယ်။”ဟု ကေအိုင်စီကို အတည်ပြုပြောကြားသည်။
(ဝေါ်လေဒေသတွင် စစ်ရေးပြင်ဆင်နေသည့် ကလို့ထူးဘောဗျူဟာ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ)
အဆိုပါ ချုံခိုတိုက်ပွဲတွင် ကရင်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အနည်းငယ် ရှိခဲ့ပြီး နအဖနှင့် BGF တို့ထံမှ 81၊ 82၊ RPG၊ M1၊ M2 စသည့်လက်နက်များ အပါအ၀င် ကျည်ဆံတချို့ကိုလည်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်မှူးစောဆန်းအောင် က ပြောသည်။ ထို့အပြင် မြ၀တီခရိုင် ဝေါ်လေဒေသ၊ ဖလူးကျေးရွာတွင် ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့ည (သောကြာနေ့)မှစ၍ ယနေ့အ ချိန်ထိ နအဖ စစ်တပ်နှင့် ကရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြား အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ နအဖဘက်က ၁ဦး သေဆုံးကာ ၂၅ဦးထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကရင်တပ်ဖွဲ့မှ ၁ဦး အနည်းငယ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဖလူးကြီး၊ ဖလူးငယ်၊ ကျောက်ခက်စသည့်ကျေးရွာမှ ဒေသခံ ကရင်ပြည်သူ ၁,၀၀၀ကျော် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖို့ဖရမြို့နယ်အတွင်းရှိ နယ်စပ်နေရာများသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ရသည်။
အလားတူ ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲရှိ တဲသုံးလုံးနှင့် ဇီးပင်ကျေးရွာကြားတွင် နအဖ ခမရ(၄၁၀)နှင့် ဒီကေဘီအေ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောအေ၀မ်းတပ်ဖွဲ့တို့ ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နအဖဘက်မှ ၂ဦး ပွဲချင်းပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ် အမှတ်(၁၀၁၆)တပ်ရင်းကို ဦးစီးသူမှာ ဗိုလ်မှူးစောမြတ်ခိုင်ဖြစ်ပြီး ယခင် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၉၉၉) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း(၃)၏ တပ်ရင်းမှူးဖြစ်သည်။
Posted by KCA.UK at 14:330comments
Footsteps for Burma on ABC television from Tracy Jones on Vimeo.
Posted by KCA.UK at 14:280comments
ဖလူးမှာ ဒီကေဘီအေနှင့်နအဖ ၂ ရက်ဆက်တိုက် တိုက်ပွဲဖြစ်နေဆဲ
Posted by KCA.UK at 12:290comments
ကေအန်ယူ နဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့များ ပူးပေါင်းအင်အားနဲ့ နအဖ စစ်ကြောင်းကို စောင့် ကြိုက်တိုက်ခိုက်
DKBA & KNU
ကေအန်ယူ နဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့များ ပူးပေါင်းအင်အားနဲ့ နအဖ စစ်ကြောင်းကို စောင့် ကြိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့ တိုက်ပွဲတခု နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ကေအန်ယူ တပ်ရင်း ၁၈ မှ ဗိုလ်အဲ့ကော် ဦးစီးတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဒီကေဘီအေ ကလိုထူး ဘောတပ်ဖွဲ့များ ပူးပေါင်းကာ ကော့ကရိတ် တောင်ဘက် အောင်လှိုင်ရွာနဲ့ စက္ကဝက်ရွာသွားတဲ့ တောင်ကြားနေရာ မှာ နအဖ စစ်ကြောင်းကို စောင့်ကြိုတိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် သေနတ်အလက် ၃၀ နဲ့ နအဖ စစ် သားအလောင်း ၃၀ ရရှိတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 12:260comments
Posted by KCA.UK at 01:030comments
Posted by KCA.UK at 00:340comments
Posted by KCA.UK at 13:370comments
Posted by KCA.UK at 10:550comments
Posted by KCA.UK at 10:480comments
စစ်အစိုးရ၏ အင်တာနက်ဆာဗာနှင့် သတင်းစာမျက်နှာ တိုက်ခိုက်ခံရ
Posted by KCA.UK at 10:400comments
CCTV video of North Korean bombs hitting South's Yeonpyeong island
Posted by KCA.UK at 10:270comments
ဝေါ်လေဒေသရှိ စစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ စားရေရိက္ခာပြတ်လပ်
နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။
ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ်ဦးဆောင်သည့် တိုးတက်သောကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်မတော် DKBA တပ်ဖွဲ့များ ၀ိုင်းရံ ထားသည့် စစ်အစိုးရတပ်စခန်းတွင် စားရေရိက္ခာပြတ်လပ်လျှက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
မြ၀တီမြို့တောင်ဖက်၊ ဝေါ်လေဒေသရှိ စစ်ဆင်မှုကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ် စကခ(၈) နည်းဗျူဟာ(၃) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းအခြေစိုက် ဗျူဟာကုန်းအား DKBA တပ်ဖွဲ့များက၀ိုင်းရံထားခြင်းဖြစ် သည်ဟု စစ်အစိုးရတပ်နှင့် နီးစပ် သူတဦးက ပြောသည်။
“ဝေါ်လေဖက်တောင်ကုန်းတကုန်းမှာ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးတို့၊ ဗိုလ်ကျော်သက်တို့ အဖွဲ့တွေက ၀ိုင်းထား တယ်တဲ့။ ၀ိုင်းထားတော့ အခုအစာငတ်၊ ရေငတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒီ DKBA ၀ိုင်းထားတဲ့ အပြင်မှာ မိုင်းတွေထပ်ထောင်ထားတာ။ သုံးဆင့်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီမှာ ဒီဖက်က စစ်ကူ တွေဘာတွေသွားလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်။ လမ်းမှာမိုင်းထိပြီးတော့ သူတို့နောက်ပြန်ဆုတ်လာတာ။ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က နင်းမိုင်းထိလို့ (၇) ယောက်ကျသွား တယ်ပြောတယ်။”
DKBA မှ ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်သက်က ယင်းကိစ္စမှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ယခုလ(၈)ရက်နေ့က မြ၀တီနှင့် ဘုရား သုံးဆူမြို့တို့တွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှစ၍ ယနေ့ထိ ၀ိုင်းရံထားဆဲ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးပြဿနာအား နိုင်ငံရေး နည်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည်ဟု ယခုလိုပြောသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပဲ သူတို့ မိုင်းနင်းမိတယ်လေ။ စစ်ကူလာတဲ့ တပ်ရင်းတွေပေ့ါ။ ဘယ်တပ်ရင်း လည်းတော့ ကျနော်တို့လည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးလေ။ ကျနော်တို့တော့ ဆက်ပြီးဝိုင်းထား မှာပေ့ါ။ သူတို့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ မဖြေရှင်းရင် ဒီစခန်းကလည်း ကျနော်တို့က မလွတ်ဖူး။”
ယင်းဒေသသည် DKBA တပ်မဟာ(၅)အခြေစိုက်ဒေသဖြစ်ပြီး ယခုလ(၁၀)ရက်နေ့က လက်ရှိ အ၀ိုင်းခံထားရ သည့် ဗျူဟာကုန်းမှ ကျေးရွာအတွင်း လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် အတွက် ဒေသခံလူထု (၄၀၀)ခန့် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ရသည်။
မကြာသေးမီအချိန်က DKBA တပ်ဖွဲ့များနှင့် ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး KNU လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့များ ကြား ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးများပြုလုပ်သွားရန် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး စောကျော်သက်က ပြော သည်။
လတ်တလောအခြေအနေအရ ဒေသတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု မရှိသေးသော်လည်း စစ်အစိုးရ၏ စစ်ကူအင်အား တပ်ရင်း(၁၀)ရင်းခန့် ဘုရားသုံးဆူဒေသသို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟု သတင်းရရှိ သည်။
ဒေသတွင်းတိုက်ပွဲများ ကြိုကြားဖြစ်ပေါ်နေသည့်အပေါ် ဒေသခံလူထုအား ငဲ့ညာသည့်အနေဖြင့် DKBA တပ်မ ဟာ(၅)မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ်က စစ်အစိုးရနှင့်သုံးရက်တာ တဖက်သတ် အပစ်ခတ်ရပ်စဲမည်ဟု ပြောဆို ခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရတပ်ဖက်မှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာပါက ခုခံကာကွယ်သွားရန်ရှိသည်ဟုပြောကြောင်း ယနေ့ထုတ်ဘီဘီစီသတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
Posted by KCA.UK at 15:520comments